Khayre OO Lakulmay Guddiga Gurmaddka uu shalay magacaabey | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Khayre OO Lakulmay Guddiga Gurmaddka uu shalay magacaabey
Khayre OO Lakulmay Guddiga Gurmaddka uu shalay magacaabey
Muqdisho(Halqaran)-Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa kulan la qaatay guddiga gurmadka fatahaadaha loogu gurmanayo dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaartay fatahaadaha ka dhashay webiga Shabeelle iyo roobka, ee uu shalay magacaabay .
Guddiga ayaa Ra’liisu Wasaare Xasan Cali Khayre war bixin ka siiyay howlihii u qabsoomay tan iyo markii la magacaabay, waxa ayna caddeeyeen in xalay kulan ay yeesheen ay ku sameysteen xeerarkii ay ku shaqeyn lahaayeen, maantana ay Beledweyne gaarsiiyeen laba diyaaradood oo sida gargaar deg-deg ah.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khayre oo guddiga faray in ay laba jibbaaraan dadaalka si loo badbaadiyo dadka iyo deegaanka iyo in la adkeeyo amniga deegaannada dadku ka bara keceen iyo deegaannada ay ku bara keceenba si bulshadu ay u hesho nabad ay ku noolaato.
Guddiga oo ka kooban siddeed wasiir iyo wasiir ku xigeen ayaa mas’uuliyaddoodu tahay in ay si hufan isugu duba ridaan qorshaha samata bixinta dadka Soomaaliyeed ee saameynta ay ku yeesheen daadadka ka dhashay roobabka iyo wabiyada karkaarrada jabsaday.
Xafiiska Wararka (Halqaran.com)